တောင်ရေးမြောက်ရေး စာစုများ: 2012
ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့မိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Entertainment သက်သက်မဟုတ်ပဲနဲ့ ကြည့်ပြီးရင် တစ်ခုခုကျန်ခဲ့တဲ့ ကားလေးတွေပါ။ မြန်မာကားတွေနဲ့ တော့တော်တော်ကွာပါတယ်။ ဟဲဟဲ
တောင်အမေရိကတိုက်က Mayan လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးစုတွေ အကြောင်းပါ။ ရွာလေး တစ်ရွာမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့ လူစုလေးကို ပိုပြီး တိုးတက်တဲ့ လူစုက လာဖမ်းပြီး တစ်ချို့ကို ကျွန်အဖြစ်ရောင်း အားကောင်းမောင်းသန် ယောက်ျားတွေကို အရှင်လတ်လတ် နှလုံးကို ထုတ်ယူပြီး ခေါင်းဖြတ်ယဇ်ပူဇော်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ လူတွေရဲ့ မိုက်မဲမှု့၊ ရက်စက်မှု့ အသိဥာဏ်နည်းမှု့တွေကို တွေ့ရမှာပါ။
၂. Lord of War
Nicolus Cage ရဲ့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ ကမ္ဘာပေါ်က စစ်ပွဲတွေနဲ့ အဲဒီစစ်ပွဲတွေမှာ ဘယ်သူက စစ်ဘုရင်လဲဆိုတဲ့ အတွေးခေါ်လေးပါ။ တကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေထက် လက်နက်ကုန်သည် တွေကစစ်ဘုရင်တွေပါလို့ ထင်ပါထားတာပါ။ အတော်ကို အနုပညာမြောက်ပါတယ်။ သာမာန်လူ တစ်ယောက်ကနေပြီး ပထမဆုံး အူစီ သေနတ်လေး စရောင်းပြီး လက်နက်ကုန်သည် အကြီးကြီး ဖြစ်လာတာပါ။ စိတ်ရင်းက သိပ်မဆိုးပေမယ့် ငွေနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားတဲ့ သူတစ်ယောက် အကြောင်း။ စာတန်းထိုးတဲ့ အခန်းမှာလည်း ကျည်ဆံလေး တစ်ဆံအကြောင်းနဲ့ စာတန်ထိုး သွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပထမဆုံး စက်ရုံကထွက်၊ ပတ်ကင်ပုံးထဲရောက်၊ ထရပ်ကားပေါ် ရောက်နဲ့ နောက်ဆုံး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းထဲ ၀င်သွားတဲ့ အထိပေါ့။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Nicolus Cage ပထမဆုံး အခန်းမှာ ပြောတဲ့စကားပဲ။ သူက Business Man ပုံစံနဲ့ စီးကရက်ဖွာပြီး ပရိတ်သတ်ဖက် လှည့်ပြောတာလေ။
"ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်နက်ပေါင်းသန်း ၅၅၀ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လူဆယ်နှစ်ယောက်မှာ သေနတ် တစ်လက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကျန်တဲ့ ဆယ့်တစ်ယောက်ကို ဘယ်လို လက်နက်တပ်ဆင်မလဲ"
၃. Case 39
နောက်တစ်ခုကတော့ Case 39 ပါ။ အဲဒါကကတော့ Horror Movie ပါ။ Horror ကားကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်ကောင်းမှာပါ။ မိသားစုတွေရဲ့ အရေးကို လိုက် ဆောင်ရွက်ပေး နေတဲ့ Company တစ်ခု ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်တော့ သူတာဝန်ကျတဲ့ မိသားစုနဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နည်းနည်းထူးခြားနေတဲ့ ကလေးမလေးကို တွေ့ပါတယ်။ တစ်ညကြတော့ အဲဒီကလေးမလေး ရဲ့ မိဘတွေက အဲဒီကလေးမလေးကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေကို သူမက ကယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီကလေးမလေးကို သူမမွေးစားမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ကလေးမလေးရဲ့ မိဘ နှစ်ပါးကဘာကြောင့် အဲဒီကလေးမလေးကို သတ်ချင်သလဲဆိုတာ သူမသိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။
Posted by Moe Tain Nyo at 10:30 AM 1 comments
Labels: ရုပ်ရှင် အညွှန်း
မှားတဲ့ အခါလည်း မှားပေမယ်ပေါ့
ကြားဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်က ဒီလိုပါ။
တစ်ခါတုံးက လူတစ်ယောက် ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ ကျွန်းသားအဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်မိတယ်။
အဲဒီ ကျွန်းသားအဖိုးကြီးက သူနဲ့တွေ့တိုင်း
စသဖြင့် ရာသီဥတုကို ခန့်မှန်းပြတယ်တဲ့။ ထူးဆန်းတာက အဲလိုပြောတိုင်းလည်း မှန်တာကြည့်ပဲ။ ဒါနဲ့ အဲဒီလူလည်း အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘာဝပညာကို အရမ်းလေးစားနေမိတာပေါ့။ ဒါနဲ့ တစ်ရက်တော့ အဲဒီတိုင်းရင်းသား အဖိုးကြီး ကိုမျက်နှာမသာမယာနဲ့ တွေ့ရတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူလည်း စကားရှာပြီး အဘ ဒီနေ့ရော ရာသီဥတု ဘယ်လိုရှိမလဲဗျ တော့မေးတော့ အဖိုးကြီးက
"မသိဘူးမောင်ရေ ကျုပ်ရေဒီယိုပျက်နေသဗျ" လို့ပြောလိုက်လေသတဲ့။
သူကသာအဟုတ်ထင်နေတာအဖိုးကြီးက ရေဒီယိုက မိုးလေ၀သ သတင်း နားထောင်ပြီး ဖောက်သည် ချနေ တာကိုး။
အပြင်မှာလည်းအဲလိုတကယ်ရှိပါ့။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေတော်တော်များများက မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းတွေ သိချင်ရင် အင်တာနက် သတင်းတွေပဲ အားကိုးရတာကို မိတ်ဆွေလည်း သိမှာပါ။ ခက်တာ တစ်ခုက အင်တာနက်သတင်းတွေကလည်း တစ်ဝက်မှန် တစ်ဝက်မှား၊ တစ်ခါတစ်လေမှန် တစ်ခါတစ်လေမှား ဆိုတော့ ကြုံရင် မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်မှ ပြန်ပြန်တိုက်ကြည့်ရတယ်။ အဓိကကတော့ အိမ်နဲ့ ပြောတဲ့ အခါပေါ့။
အိမ်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းတို့ gtalk တို့ သုံးရတယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်း အမေနဲ့ စကားပြောရင် မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းတွေ မေးရတာအမောပေါ့။ အမေ့ဆီက သတင်းပလင်း ပိုစုံစုံကြားရတတ်တယ်။
အမေ အဲဒီမှာ ဘာထူးသေးလဲ ကားကိစ္စတွေ ဘယ်လိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ရော ဘာရော ညာရောနဲ့ အစုံပဲ။ ဒီမှာတော့ဒီလိုကြားတယ် အဲဒါဟုတ်လား။ စသဖြင့်လည်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရသေးတယ်။ အမေကလည်း သူသိသမျှပြောရှာပါတယ်။
အဲ နောက်ပိုင်းကျတော့ အမေပြောသမျှသတင်းတွေနဲ့ အင်တာနက်မှာ တွေ့သမျှသတင်းတွေ အကုန်လုံး အတူတူလောက်ပဲဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း သတင်းဌာနတွေ တယ်မှန်လာပါလား ဆိုပြီး ချီးကျူးမိပါတယ်။ အမေ့ကိုလည်း သတင်းစုံပါ့ ဘယ်ကများသိတာပါလိမ့်လို့ အံ့သြမိတယ်။ အမေ့ကို တစ်ရက်တော့ မေးဖြစ်တယ်။ အမေ သတင်းတွေက တယ်စုံပါလားဗျ။ ဘယ်ကနေသိတာလဲ။
အမေကတော့ ဘာမှ မထူးဆန်းတဲ့ ဟန်နဲ့
"စုံမှာပေါ့ ဟဲ့ အင်တာနက်က ဖတ်ပြောတာလေ" တဲ့ဗျ။
Posted by Moe Tain Nyo at 4:14 PM 1 comments
ထူးခြားတဲ့ horror movie
မိတ်ဆွေ Horror Movie စိတ်ဝင်စားပါသလား။ တစ်ချို့ကတော့ Horror Movie မကြိုက်ဖူးတဲ့ ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖျော်ဖြေရေး အနေနဲ့ တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတယ်။ စိတ်ဝင်စား တယ်ဆိုရင်တော့ Terror Tract ဆိုတာ လေးကြည့်ကြည့်ဗျို့။ တခြားဇာတ်လမ်းတွေထက် ထူးခြားတယ်။ စိတ်ဝင် စားစရာ အတော်ကောင်းတယ်ဗျ။
ဇာတ်လမ်းကို ဒီလိုဗျ။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ယောက် က လင်မယား နှစ်ယောက်ကို အိမ်လိုက်ပြနေတယ်။ သူ့ကားလေးနဲ့ပေါ့ဗျ။ သူကရှေ့ကမောင်း လင်မယား နှစ်ယောက်က နောက်က။ ပထမဆုံးအိမ်ကို ရောက်တော့ အိမ်လေးကို လျှောက်ကြည့် အိမ်က ကောင်းတယ်ပေါ့။ လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်း သဘောကျပါတယ်။ စကားစပ်မိရင်း အရင်ကနေတဲ့သူတွေ အကြောင်းရောက်သွားတော့ Agent မျက်နှာပျက်သွားတယ်။ လင်မယား နှစ်ယောက်က ပြောပြပါ လို့ ပူဆာတော့မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြတယ်။
အရင်က လင်မယားနှစ်ယောက်နေတယ်တဲ့။ တစ်ရက်တော့ ယောက်ကျားက ခရီးတစ်ခုထွက်သွားတယ်။ ထွက်သွားသွားခြင်းပဲ မိန်းမက တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်ပါလေရော။ ယောက်ကျားကလည်း လည်တယ်ဗျာ။ သူ့မိန်းမဖောက်ပြန်တဲ့ သတင်းကြားလို့ ခရီးသွားချင်ယောင်ဆောင်တာ။ အဲ ကာင်းခန်း ရာက်နေတုန်းအဲဒီယောက်ကျားက သေနတ်ကြီးနဲ့ ရောက်လာပါလေရောဗျာ။ ယောက်ကျားလည်း တော်တော် စိတ်ရိုင်းဝင်သွားတာဗျ။ သူက သေနတ်နဲ့ ချိန်ပြီး သူ့မိန်းမကို ကြိုးဆွဲချခိုင်းတယ်။ ပြီးမှ ဟိုကောင်ကို ပစ်သတ်မယ်တဲ့။ တိုတိုပြောရရင် နောက်တော့ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ဖောက်ပြန်တဲ့ ကောင်က အဲဒီမိန်းမရဲ့ ယောက်ကျားကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်ပါလေရော။ ပြီးတော့ သူတို့ အလောင်းကို ရေကန်ကြီးထဲ သွားပစ်ချ ကြတယ်။ ဟိုဖောက်ပြန်တဲ့သူကလည်း အဲဒီအိမ်မှာ ခဏဆက်နေနေတာပေါ့။ အဲဒီနေ့ကစပြီး မိန်းမက အိပ်မက် ဆိုးတွေ မက်တော့တယ်။ သူ့ယောက်ကျား ရေကန်ထဲက ထလာပြီး အိမ်ကို ပြန်ပြန်လာပြီး သူတို့ကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ဆိုတဲ့ အိပ်မက် နေ့တိုင်းမက်တော့တာပဲ။ အမြဲခြောက်ခြားနေရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ယောက်ကျားရဲ့ သူငယ်ချင်းရဲက သူ့သူငယ်ချင်းပျောက်နေတာ နည်းနည်းရိပ်မိသွားတယ်။ ဖောက်ပြန်တဲ့ သူနှစ်ယောက် မေ့သွားတာက သူ့ယောက်ကျားရဲ့ ကားကို မဖျောက်ဖျက်ရသေးတာပဲ။ ဒါနဲ့ ကားကို ရေကန်ထဲ ချမယ်လုပ်တော့ ကားသော့ကမရှိဘူး။ သေသွားတဲ့ ယောက်ကျားရဲ့ အိတ်ထဲမှာ ပါသွားရော။ ဒါနဲ့ မဖြစ်ချေဘူး ဆိုပြီး ဟိုတစ်ယောက်က ရေငုတ်ပြီး အဲဒီသော့ကို သွားယူ။ မိန်းမက အိမ်မှာ စောင့်နေ။ အဲလို စောင့်နေတုန်း မိန်းမက အိမ်မက်လိုလိုဘာလိုလို နဲ့ သူ့ယောက်ကျား ရေကန်ထဲက ထလာတာသလိုလို မြင်ယောင်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တာ ဟိုကောင်ဖြစ်နေပါလေရောတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီမိန်းမလဲ အဲဒီအိမ်မှာ တင်ကြိုးဆွဲချ သေသွားပါတယ်တဲ့။ ဇတ်လမ်းက ကျွန်တော်ပြောတာတက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပြီးတော့ အိမ်ဝယ်မယ့်လင်မယား အဲဒီအိမ်ကို ဘယ်ဝယ်တော့မလဲ။ နောက်တစ်အိမ်ပြခိုင်းတာပေါ့။ Agent ကလည်း အတော်ရယ်ရတယ်။ မပြောရ မနေနိုင်နဲ့တူတယ်။ နောက်အိမ်ကိုလည်း အဲလိုပဲ။ ရာဇ၀င်ပြောပြ။ အဲလိုပြတာ သုံးအိမ်။ ဇာတ်လမ်းတိုလေး သုံးခုဗျ။ သုံးခုလုံးတော်တော်ကောင်းတယ်။ Agent ကိုလည်း သူ့Boss ကအိမ်ရောင်းရအောင် ဖုန်းနဲ့ pressure ပေးနေပြီ။
စိတ်ပါရင် ဇာတ်လမ်းသာ ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။ တကယ်ပါ။ တော်တော် ကောင်းတယ်။
Posted by Moe Tain Nyo at 10:00 AM3comments